InMoment Study Inoburitsa Mazano matanhatu Asingatarisirwi Ekushandurwa | Martech Zone
Vatengesi vanobatanidza zviitiko zvakasarudzika pamwe nekushambadzira kwakanangana nepo vatengi vachisanganisa ruzivo rwevatengi (CX) nerutsigiro nekutenga Muchokwadi, 45% yevatengi vanokoshesa kuve neyakajairwa ruzivo rwekutsigira kudyidzana pamusoro pevaya vanoita nezvekutengesa kana yekutenga maitiro maitiro.
Iyo mukaha yakaonekwa uye yakanyorwa zvizere muchidzidzo chitsva chepasi rose kubva kuInMoment, Simba reKushushikana uye Kugadzirisa: Maitiro Anogona Kunzwisisa uye Kusangana Nevatengi Zvinotarisirwa. Munyika dzese dzakabvunzwa, mabranders nevatengi havana kuenderana pavakabvunzwa nezve zvemunhu. Izvo zvakawanikwa zvinongedzera kune ese ari maviri dambudziko uye mukana zvine chekuita nekusarudzika.
Kunyangwe paine misiyano kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe, vatengi vepasirese vakafanana zvakanyanya kupfuura ivo vakasiyana. Ivo vanoda zvigadzirwa kuti vachengete zvavakavimbisa uye voita nhamburiko yekugadzirisa rutsigiro rwavanopa parwendo rwese rwevatengi. James Bolle, VP, Musoro weVashandi, EMEA kuInMoment
Izvi zvinonongedzera kunhau yatisingadanidzi nezvayo zvakakwana - kushambadzira kunoenderana nemusangano wezvigadzirwa zvinotarisirwa uye nedhipatimendi rebasa revatengi rinopa rutsigiro rwakasiyana. Kana chimwe chiri kushaikwa, munyika ino yemagariro chichava nemhedzisiro inokuvadza pane ako ese ekushambadzira ekuedza.
Zviwanikwa zve kuvandudza ruzivo rwevatengi kushandisa poisisi yemunhu kune mamwe makiyi ekubudirira, asi zvimwe zvishoma zvichange zvisingatarisirwe kumasangano mazhinji. Vatengi vanoda:
Chiitiko cheMunhu - Kana iwe uchizotora ruzivo, vatengi vanotarisira kuti iwe ushandise iyo data kuita yako mameseji uye kukwidziridzwa maererano.
Transparency - Mhando dzinofanira kuchengetedza vatengi pamusoro penzira dziri kushandiswa nemhinduro dzavo kuvandudza kana kushandura chigadzirwa kana sevhisi.
Kunzwa Trumps Rinoshanda - Kupatsanurana kweBrand kunozove kwakakomba kwehukama uye neruzivo rwevatengi pane zvechigadzirwa maficha kana kusarudzwa.
Ongororo Pfupi, Kuteerera Kwakawanda - Mapfupi mhinduro ongororo nemitauro yekupa mhinduro inobvumira vatengi kugovana nyaya nemazwi avo. Kuwedzera kushandiswa kwekutarisa uye kuunganidzwa kwenzanga, izwi, uye nhare mbozha data.
Mobile Kutanga - Kugonesa 24/7 nharembozha kugadzirisa kukwirisa kwevatengi mafoni maitiro.
Zvimwe Zvakavimbika Pamhepo Ongororo - Zvikwata zvinobatsira vatengi kuona zvirinani ruzivo rwevezera ravo nezve kutenga sarudzo nekutsigira zvakaongororwa online ongororo.
Chidzidzo ichi chaisanganisira mhinduro kubva kuvashambadzi zviuru makumi maviri nemabhuru zviuru gumi kubva kunyika gumi nembiri, kusanganisira Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, New Zealand, Norway, Spain, Sweden, United Kingdom neUnited States. Chirevo chinoteedzera mibvunzo mitanhatu yekuenzanisa uye nekuwedzera, uye inoongorora iro basa rekuita uye manzwiro muhukama-hwevatengi hukama.
Dhawunirodha Yakazara InMoment Report
InMoment ™ igore-rakavakirwa vatengi ruzivo (CX) optimization chikuva iyo inobatsira mabhenji kuwedzera vatengi uye mushandi ruzivo rwekuzivisa zvirinani bhizinesi sarudzo, uye kugadzira yakakwira-kukosha hukama.
Tags: pezvitsigamutengi zvinotarisirwavatengi vanozivacxdata kutoraManzwiroinmomentPersonalizationchigadzirwa kurudzironzira dzekuongorora